निर्मला पन्त हत्याकाण्डका एक जना अभियुक्तलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेपछि कञ्जनपुरको महेन्द्रनगरमा आन्दोलन थप चर्किएको छ
काठमाडौँ । निर्मला पन्त हत्याकाण्डका एक जना अभियुक्तलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेपछि कञ्जनपुरको महेन्द्रनगरमा आन्दोलन थप चर्किएको छ । निर्मला हत्याको अभियोगमा मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका दिलिप सिंह विष्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको थियो ।
हत्यापछि जति विरोध भयो, त्यो भन्दा बढी विरोध हत्या अभियोगमा विष्टलाई पक्रेपछि भइरहेको छ । प्रहरीले हत्याराको आशंकामा पक्राउ गरेर अभियुक्त सार्वजनिक गर्दा किन यसरी विरोध भइरहेको छ ? सिंगो बस्ती नै प्रहरी प्रशासनको विरोधमा उत्रेपछि प्रश्न प्रहरीमाथि पनि तेर्सिएको छ । के साँच्चै मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका व्यक्तिलाई अभियोग लगाएर हत्यारा उम्काउन खोजेकै हो त ? हत्याका साथै यसको पनि न्यायिक छानविन हुन जरुरी छ ।
व्यवसायी, महिला, युवा विद्यार्थी लगायत स्थानीयले वास्तविक अभियुक्त सार्वजनिक नगरेको भन्दै आन्दोलन चर्काउदै गएका छन् । स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने देखेपछि स्थानीय प्रशासनले सर्वदलीय, सर्वपक्षिय बैठक बोलायो । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार खडका र प्रहरी प्रमुखलाई जिल्लाका चार राजनीतिक दल र नागरिक समाजले हत्याको गहन अनुसन्धान गर्न सुझाव दिए । उनीहरूको आशय पनि विष्ट हत्यारा होइनन भन्ने नै थियो । सिंगो बस्ती एकातिर प्रहरी प्रशासन किन अर्कातिर भयो ? के प्रहरीले विष्ट नै हत्यारा हुन भन्ने प्रमाण पाइसकेको हो र ? यति प्रमाण छ भने सार्वजनिक गर्न किन ढिलाई ?
१० वर्षअघि आफ्नै भिनाजुको हत्या गरेका भीमदत्त नगरपालिका–१९ वागफाँटाका ४१ वर्षीय विष्ट बसपार्कमा माग्दै हिड्ने गरेको भन्दै स्थानीयले उनी हत्यारा हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । हत्यारालाई उम्काउन विष्टलाई प्रयोग गरिएको स्थानीयको दावी छ । तर, प्रहरीले भने अनुसन्धान भइरहेकाले यथार्थ छिट्टै पत्ता लाग्ने बताउँदै आएको छ ।
निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन र निर्दोशलाई नफसाउन माग गर्दै स्थानीयले बजार र यातायात बन्द गराएका छन् । उनीहरूले ठाँउ ठाँउमा टायर बालेर हत्याको बिरोध र वास्तविक दोषि सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप समेत भएको छ । प्रदर्शनकारीले प्रहरीको जिपमा ढुङगामुढा प्रहार गरेपछि प्रहरीले १२ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ ।
भिड तितरवितर पार्न अश्रुग्यास हान्नु परेको प्रहरीले जनाएको छ । सो क्रममा प्रहरीले ५ जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ । स्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन सम्बन्धित निकाय बेलैमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
More in this category: « पोखरा विमानस्थलका लागि थप जग्गा अधिग्रहण हुँदैन : पर्यटनमन्त्री अधिकारी	कृष्ण मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला »